राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणको स्मरण – Chitwan Post
आज राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस । राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाह आजपर्यन्त हरेक नेपालीको मनमनमा बस्दै आएका छन् । तथापि, उनीप्रति दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् सरकार कृतघ्न हुन पुग्यो । र, शाहको जन्मदिवस खारेज ग¥यो । आजको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति उपेक्षा वा अनादर गर्नु सन्तानले आफ्नै वैधताप्रति आशंका गर्नुबराबर हो । नयाँ युगको आरम्भका नाममा होस्, चाहे नयाँ नेपालको रूमानी रटान लगाउने क्रममा सर्वप्रथम पृथ्वीनारायण शाहमाथि नै प्रहार हुन पुग्यो । नयाँ नेपालका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा र सालिकहरु ढालिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पुर्खाका रुपमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने घृणित कार्य सुरूवात भयो । सालिक भत्काएर इतिहास मेट्न सकिँदैन, न त कसैलाई बहिष्कार गर्दैमा उसको योगदान बिर्सन नै सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन यो । जसको पौरखको जगमा एकीकृत नेपाल निर्माण भयो, उसैलाई उपेक्षा गरेर नयाँ जोगीहरु बढी खरानी घसिरहेका छन् । इतिहास नमान्नेले कुनै इतिहास रच्न सक्दैनन् । जसले इतिहास रच्न सक्दैन उसले इतिहासको उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन ।
सरकारले बिदा कटौती गरे पनि राष्ट्रिय एकता दिवसमा हरेक नेपालीको शिर श्रद्धाले झुक्छ । पृथ्वीनारायण शाहको नाम अगाडि आउनासाथ गर्वले छाती फुल्छ । आज नेपाल एकीकरणको साढे दुई शताब्दीपश्चात् पनि पहिलो राष्ट्रनिर्माताका रुपमा स्मरण गरिने पात्र उनीमात्रै हुन् । पृथ्वीनारायणप्रति जतिसुकै कृतघ्न बने पनि विश्व रंगमञ्चमा गर्विलो परिचय दिलाउने पनि उनी नै हुन् । अंग्रेज साम्राज्यबाट नेपाललाई जोगाउन एकीकृत राज्यको परिकल्पना गरी बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकता गरी सिंगो राज्य निर्माण उनैले गरेका थिए । अहिले सिंगो राज्यलाई संघीयताको नाममा टुक्राउन खोजिँदै छ । अहिलेको जस्तो प्रविधि र स्रोत नहुँदानहुँदै पनि युद्धकौशलमा निपूर्ण पृथ्वीनारायणले आफ्नो जीवनकालमै नेपाल एकीकरण गर्न सफल भए । नेपालका सबै क्षेत्रमा विशिष्ट परम्परा र संस्कृति अहिलेका नेताहरुले निर्माण गरेका पक्कै होइनन् । त्यसबेला इसाई धर्मको प्रचार गर्दै नेपालको चीरहरण गर्न खोज्ने पादरीहरुलाई चारभञ्ज्याङ कटाउने नेपालका धरोहर पृथ्वीनारायण शाहलाई आजका केही इसाईका उपासकहरुले खलनायकका रुपमा भ्रम छरेर बहिष्कार गरिरहेका छन् । अखण्ड नेपालको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नेहरुले मात्र पृथ्वीनारायणलाई युद्धोन्मादी राजा ठान्छन् ।
इतिहास लेख्ने विद्वान्हरुले पृथ्वीनारायणको ‘दिव्योपदेश’मा पनि उनलाई न्यायप्रेमी राजाका रुपमा परिभाषित गरेका छन् । उनले घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेर सुशासनको सन्देश दिएका छन् । आज सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधि चाहनु मूर्खता हुन थालिसकेको अवस्था छ । संघीय गणतन्त्रमा पात्र र प्रवृत्ति फेरिए पनि समग्रतामा राजतन्त्रमा भन्दा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । पहिले एउटा राजा थिए, अहिले सयौँ राजा छन् । फरक यत्ति हो कि अहिले धेरैले खाएका छन् । नेपाल र नेपालीको नियति भने फेरिएको छैन । आज विद्यालय शिक्षा पार गरेका हरेक नागरिक विदेशको सपना बोकेर बसिरहेका छन् । घर रित्तो, गाउँ रित्तो भइसकेको छ । एकता र मेलमिलापभन्दा वितृष्णा र वैरभाव बढ्दो छ । नेताहरुले आर्थिक समृद्धिको सपना बुनेर अझै केही वर्ष राज गरे पनि नेपाल र नेपालीको भविष्य भने राष्ट्रिय एकता र निर्माणमा छ । तराई मधेसमा विखण्डनकारीहरुको अभियान, देशभर क्रिश्चियनहरुको बढ्दो प्रभाव र इतिहास मेट्न उद्यत नेताहरुको नियतले के सन्देश दिइरहेको छ ? पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान दर्शाउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य र राष्ट्रनिर्माताप्रतिको कृतज्ञभाव हो । उनीप्रति श्रद्धापूर्वक सलाम !
राजनीतिक चरित्रको शुद्धीकरण
इच्छा (आजको कविता)